Liiska Waxyaabaha E-commerce ee Faahfaahinta Liistada Hubinta | Martech Zone
Liiska Waxyaabaha E-commerce ee Faahfaahinta Liistada Hubinta
Arbacada, Oktoobar 5, 2016 Douglas Karr
Waxaan dhawaan ka caawinnay goob e-commerce ah inay hagaajiso jiritaankooda websaydhka. Waxay ku shaqeynayeen softiweer lahaansho sidaas darteed waxay lahaayeen dib u dhac shaqo horumarin ah oo ay ku sameynayaan si ay u horumariyaan guud ahaan qiimeynta raadinta. Si kastaba ha noqotee, xitaa marka la eego isbaarooyinkaas, waxaa jiray fursado aad u ballaaran kordhinta sicirada. Waxaan dib ugu magacdarnay shirkadda si loo casriyeeyo muuqaalka iyo dareenka, waxaan dhidibnay cod awood leh oo lagu kalsoonaan karo, waxaanan ka caawinnay inay dib u cusbooneysiiyaan websaydhkooda iyo isgaarsiinta emaylka si ay uga jawaabaan moobiilka. Ugu dambeyntiina waxay noqotay Heerarka beddelashada in ka badan 23% sanadkii ayaa ka sarreeya haar oo keliya isbeddeladaas.
Shirkadaha mararka qaarkood aad ayey ula qabsadaan oo ay ugu adkaadaan wax kasta oo ay tahay inay sameeyaan halkii ay ka shaqeyn lahaayeen liiska hal-abuurka ee ay ku sixi karaan. Horumar kastaa wuxuu kordhiyaa… iyo inaad sii waddo inaad kobciso khibrada iibsashada isticmaalaha oo aad iyo aad u badan, tirooyinkaasi way sii weynaan karaan. Macaamiilkan, lambarradan waxay u soo saari karaan malaayiin doolar khadka hoose.
Ka saraysa Qaybaha Waxsoosaarka Ganacsi ee Iibso
In kasta oo aan jeclahay xogtan, waxaa laga yaabaa inay iloobeen mid ka mid ah walxaha ugu muhiimsan ee barta internetka e-commerce guud ahaan raadinta gudaha foom! Isticmaalayaal badan ayaa ku degi doona bogga wax soo saarka raadinta, bulshada, ama xayeysiinta laakiin sheyga waxaa laga yaabaa inuusan aheyn waxa ay raadinayaan. 30% booqdayaasha barta internetka ee e-commerce waxay isticmaali doonaan raadinta gudaha
Qiimeynta iyo Dib u eegista
Tilmaamaha Qorshaha Qiimeynta
Sawirro Dheeraad ah
Kharash Bilaash ah ama Kharash
Qiimaha Jadwalka Qiimaha
Kudar Baabuurka ama Badhanka Iibso
Ku dar liistada Liiska
Badhamada Wadaagista Bulshada
Hoos Qaybaha Waxyaalaha Laab Laab
Haddii aad rabto inaad aragto shirkad tijaabinaysa tan oo heleysa natiijooyin aan caadi aheyn, hubi boggaga wax soo saarka ee Amazon. Waxaan u maleynayaa in shirkaduhu inta badan ka xishoodaan ku darista astaamaha iyo shaqeynta bogagga wax soo saarkooda. Macluumaadka badan, ayaa ka sii fiican. Waa inaadan ka dhigin kuwa ku soo booqda inay raadiyaan meel fog si ay u helaan macluumaadka ay ugu baahan yihiin inay ku gaaraan go'aanka iibsiga.
Alaabta SKU / Code
Nadiifi oo Si Fudud Loo Akhriso Fonte
Faahfaahin Faallooyinka Macaamiisha
Foomka Dib-u-eegida si aad uga tagto dib-u-eegis
Qaybaha Waxsoosaarka Bogga
Waxaan kugula talin lahayn Nagu saabsan xiriiri si dadka loo keeno bog ka soocaya shirkaddaada kuwa kula tartamaya. Sawirada shaqaalahaaga, xaruntaada, iyo nooc kasta oo samafal ama damac ah oo aad qabtid waa inay halkaas u joogaan si shaqsi ahaaneed ula macaamilaan.
Ikhtiyaaraadka Adeegga Macaamiisha
Xiriirinta Siyaasadda Soo Celinta, Siyaasadda Soo Celinta, iyo Siyaasadda Dhoofinta
Xiriirinta Bogagga Qaybta Badeecadda Ugu Weyn
Iskuxirayaasha Shirkadaha Warbaahinta Bulshada
Foomka Is-qoritaanka Warsidaha
Qaybaha SEO ee Bogga Wax Soo Saarka
Raadinta raadintu waxay u baahan tahay walxo muuqda iyo moodba in si habboon loo dhiso loona adeegsado boggaaga. Xitaa adeegsiga cinwaano hoosaadyo, geesinimo, iyo qoraal xoojinaya ayaa isbedel sameyn kara.
Kordhi Cinwaanka Bogga
Tayo Meta Sharaxaadda
Magaca badeecada H1 Tag
Sawirka Sawirka Alt Tags
Google Console Search (Maamulayaasha)
Qaabdhismeedka URL ee Saaxiibtinimada Raadinta ah
Shuruudaha Farsamada ee Badeecadda Ecommerce
Tilmaamaha Schema ayaa kor lagu soo sheegay, laakiin astaamaha Opengraph ee isdhexgalka bulshada sidoo kale waa wax weyn in la haysto si aad u qeexi karto sawirka, cinwaanka iyo sharraxa badeecada markii internetka lagu wadaago.
Loading Xawaaraha Bogga
Ku soo dejiso Ebook on Design Page Design
Waa tan faahfaahinta buuxda oo ka socota 99MediaLab, Qaybaha Naqshadeynta Bogga Faahfaahinta Badeecadaadu Waa Inay Leedahay:
Tags: 99medialabbogga ecommerceqaybaha ecommercebogga sheyga ecommercewaxyaabaha faahfaahsan ee boggabogga wax soo saarkawalxaha bogga sheyga
Sida Loo Cabiro Waxtarka Xiriirkaaga Dadweynaha ee Internetka